🥇အကောင်းဆုံး Litecoin ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြမှုများ ဇန်နဝါရီ 2022 | ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန် ၂ ခုကို အပြည့်အစုံ လေ့လာပါ။
၂၀၂၁ တွင်အကောင်းဆုံး Litecoin Trading အချက်ပြများ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 12 ဇွန်လ 2021
ထို့ကြောင့်သင်၎င်းကိုရှာဖွေနေနိုင်သည် အကောင်းဆုံး Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းစတင်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့တည်းမဟုတ်၊ သင်၌နာရီ crypto စျေးကွက်များကိုမျက်စိတစ်ဆုံးကြည့်ရန်အချိန်မရှိနိုင်ပေ။
ဤလမ်းညွှန်တွင် Litecoin ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြများမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်နှင့်၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းသည်။ Learn2Trade crypto signal ၀ န်ဆောင်မှု၏အဝင်နှင့်အထွက်ကိုငါတို့နှစ်ခုလုံးကိုအခမဲ့ဖုံးလွှမ်းပေးသည် နှင့် အသေးစိတ်အစီအစဉ်များအတွက်ပရီမီယံ
အပတ်တိုင်းအခမဲ့ Crypto Signal သုံးခုကိုရယူပါ
အချက်ပြမှုအားလုံး Cryptocurrencies ဖုံးလွှမ်းထားသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ VIP အုပ်စုသို့အခမဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်
အခမဲ့ Crypto Signals ကိုရယူပါ
စတင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး Litecoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြများ
Moving ပျမ်းမျှ convergence / မတူကွဲပြား
သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အတိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြားဇယားပုံစံများနှင့်စာရင်းအင်းညွှန်ကိန်းများရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်အင်အား၊ အသံအတိုးအကျယ်၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်သမိုင်းကြောင်းစျေးနှုန်းအချက်အလက်များကဲ့သို့သရုပ်ဖော်ပြသတိုင်းထွာမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ထို့ပြင်ဤဇယားဆွဲကိရိယာများကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ယူရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည်။ ဤနေရာတွင် Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြပုံများပေါ်လာသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ငါတို့သည်ဤအထူးကြပ်မတ်သုတေသနသင်လုပ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။
ကုန်သွယ်မှု Litecoin ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြ ၂ ခုဘယ်လိုလေ့လာသလဲ။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်သူများသည် Litecoin နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော crypto စျေးကွက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်တာဝန်ယူသည်။ ကုန်သွယ်မှုအကြံပေးချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြများသည်စျေး ၀ င်ရန်နှင့်စွန့်စားရမည့်နည်းလမ်းအတိုင်းသင်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုအမြဲထည့်သွင်းပါ။
မင်းကိုပိုရှင်းတဲ့ရုပ်ပုံလွှာပေးဖို့၊ ငါတို့ Litecoin ကုန်သွယ်မှုအချက်အလတ်တွေမှာထိုးထွင်းသိမြင်မှုသော့ချက်တွေကိုအောက်မှာကြည့်ပါ။
Cryptocurrency တွဲ: LTC/AUD
အမှာစာတန်ဖိုးကန့်သတ်ချက်: AU $ 260
Stop-Loss တန်ဖိုး: AU $ 255
အမြတ်အစွန်းတန်ဖိုး - AU $ 270
အထက်ပါဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတေးလျဒေါ်လာနှင့် Litecoin တွင်ကြာရှည်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမြင်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းတွင်အကြံပြုထားသောကန့်သတ်ချက်၊ ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အမြတ်ယူခြင်းစျေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများသည်စျေးကွက်များကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်အမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ပို့ပါ။ crypto အချက်ပြ Telegram အုပ်စုတစု။
အကောင်းဆုံး Litecoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြများတွင်အဘယ်အရာပါဝင်လိမ့်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုအားလုံးတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်း ၅ ခုရှိသည်၊ ၎င်းကိုအောက်တွင်အကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြနိုင်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကိုယခင်ကမရောင်းဝယ်ခဲ့လျှင် Litecoin သည်အစုရှယ်ယာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရောင်းဝယ်လိမ့်မည်။
ပထမရွေးချယ်မှုသည် Bitcoin၊ Ripple၊ Bitcoin Cash (သို့) Stellar ကဲ့သို့အခြား crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို crypto-cross pair အဖြစ်လူသိများပြီး LTC/BTC, LTC/XRP, LTC/BCH နှင့် LTC/XLM တို့အသီးသီးပေါ်လာလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်သည် Litecoin ကို fiat ငွေကြေးများနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်သြစတေးလျဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ၊ ယူရိုစသည့်ငွေကြေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငွေလဲနှုန်းကိုခန့်မှန်းနေသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်၊ ထို့ပြင်မည်သည့်အမြတ်နှင့်အရှုံးကိုတွက်ချက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
အချို့သော cryptocurrency ပွဲစား ဆွစ်ဖရန့် (LTC/CHF) နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် Litecoin တွင်စျေးကွက်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အခြားသူများသည်အသုံးအများဆုံးအတွဲအချို့ကိုသာကမ်းလှမ်းသည် ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း.
Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရင့်အဖွဲ့သည်အတိတ်နှင့်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အခြားအရာများထက်အချက်အလက်များစွာကိုစိစစ်သည်။ ၎င်းသည် cryptocurrency စျေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြများကို crypto-fiat အတွဲများ (သို့) အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကန့်သတ်မထားပါ။
Litecoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြများကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်တိုခြင်းသို့ရှည်သွားခြင်းတို့အတွက်နာကျင်စေသောရွေးချယ်မှုသည်သင့်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါ။ အချက်ပြတစ်ခုစီသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်တွဲမေးခွန်းတွင်သင်ရှည်သည်ဖြစ်စေ၊ တိုသည်ဖြစ်စေသင့်အားပုံပြလိမ့်မည်။
တိမ်ကိုရှင်းလင်းရန်သြစတေးလျဒေါ်လာနှင့် Litecoin သုံး၍ ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ပါ။
သတင်းအချက်အလတ်များကိုစစ်ဆေးပြီးနောက် LTC/AUD သည်ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည် တိုးမြှင့်လာသည် တန်ဖိုးအားဖြင့် -
ဤအချက်သည်သင်သွားရန်ညွှန်ပြလိမ့်မည် ရှည်လျားသော တွဲပေါ်မှာ
မဟုတ်ရင်အထောက်အထားကအချက်တစ်ခုဆီ ဦး တည်နေတယ်ဆိုရင် လြော့ပေါ့စေ တန်ဖိုး - သွားရန်အချက်ပြလိမ့်မည် တိုတောင်းသော
Litecoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြရင်ထောက်ခံရတော့မယ် ရှည်လျားသော LTC/AUD တွင်aဝယ်ခြင်း order လိုအပ်ပါသည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်အချက်ပြလျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာသွားရန်ဖြစ်သည် တိုတောင်းသော - တစ်ဦး ရောင်းချ order လိုအပ်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Learn2Trade တွင်ဤနေရာတွင်လုံးဝတရားမ ၀ င်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင် crypto coin တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကို ဦး စားပေးမထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သည်ဤမတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်မှပုံမှန်အကျိုးအမြတ်များရရှိရန်အချိန်ငတ်မွတ်သောသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိသော Litecoin ကုန်သည်များအားအခွင့်အလမ်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်တန်း၏၊ သင်ခြေထောက်အလုပ်အချို့ကိုချွေတာသည်။
အော်ဒါအမျိုးအစားများအရကုန်သည်များသည် ၀ င်ရောက်သည် crypto ကုန်သွယ် နည်းလမ်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုမှာစျေးကွက်အမိန့် (သို့) အကန့်အသတ်အမိန့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုအများစုတွင်ကန့်သတ်အမိန့်စျေးနှုန်းပါ ၀ င်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ သင်လက်ရှိသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသောစျေးကွက်အမိန့်တစ်ခုနှင့်မတူဘဲ၊ ကန့်သတ်အမိန့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်မှုတွင်စျေးနှုန်းအတိအကျသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ ငါတို့ရဲ့ Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြတွေနဲ့ကန့်သတ်အမိန့်တန်ဖိုးကိုအမြဲထည့်ပေးလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းစျေးကွက်အမိန့်ကိုတောင်းဆိုခြင်းမရှိလျှင်၎င်းသည်!
သင် LTC/EUR ရောင်းဝယ်နေသောနေရာအောက်ရှိကန့်သတ်အမိန့်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဥပမာကိုကြည့်ပါ။
LTC/EUR ကိုလက်ရှိတွင်ပေါင် ၂၆၆ ဖြင့်ရောင်းချသည်
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနလုပ်ပြီးရင်ငါတို့ဒီအတွဲကိုရမယ်ထင်တယ် ချိုးဖောက် 275 ၂၇၅ - သွားရတာကောင်းတယ် ရှည်လျားသော
ထို့ကြောင့်သင်၏အချက်ပြအတွက်ကန့်သတ်အမိန့်တန်ဖိုးသည်ပေါင် ၂၇၅ ဖြစ်သည်
LTC/EUR ပေါင် ၂၇၅ သို့ရောက်သွားလျှင်ပွဲစားသည်သင်၏စျေးနှုန်းထဲသို့ ၀ င်ရန်သင်၏ပွဲစဉ်ကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
အော်ဒါသည်စျေးနှုန်းထိသည်အထိဆက်လက်တည်ရှိနေမည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ကန့်သတ်မိန့်ကိုလုံးဝပယ်ဖျက်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။ သင်မှာကြားမှုအားချန်လှပ်ထားသင့်သည်ဖြစ်စေမပေးသင့်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram group အတွင်းမှပယ်ဖျက်သင့်သည်ကိုငါတို့သိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin ကုန်သွယ်မှုအချက်အလတ်အားလုံး၌တွေ့နိုင်သောအခြားအဓိကမက်ထရစ်မှာ 'ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးခြင်း' တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြတ်တောက်ပြီးသင်၏ရာထူးမှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
၀ င်ကြေးယူရို ၂၇၅ ကိုကန့်သတ်အမိန့်တစ်ခု သုံး၍ အကြံပြုခဲ့သည်
အချက်ပြ၌ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးခြင်းတန်ဖိုးသည်ပေါင် ၂၇၂ ဖြစ်ပြီး ၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသည်။ အောက်တွင် အကြံပြုထားသောစျေးနှုန်း
ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင် ၁% ထက်ပိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ
crypto-fiat အတွဲသည်ပေါင် ၂၇၂ သို့ကျဆင်းသွားပါကအကျိုးဆောင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်
အရေးကြီးသည်မှာ Litecoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှသွားရန်ခေါင်းညိတ်ခဲ့လျှင် တိုတောင်းသော -ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုကိုသဘာဝအားဖြင့် ၁% သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ အထက် ကန့်သတ်စျေးနှုန်း
ယူပါ - အမြတ်တန်ဖိုး
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ အရင်ဥပမာမှာ stop-loss order ကမင်းရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ၁% အမှတ်ကျော်လွန်သွားတာကိုတားဆီးခဲ့တယ်။ အမြတ်ယူမှုအမိန့်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားရာထူးပိတ်မည့်အချိန်နှင့်အကျိုးအမြတ်ကိုသော့ခတ်ရန်တိကျစွာခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းချက်ပေါ် မူတည်၍ ကန့်သတ်စျေးထက် ၁ ရာခိုင်နှုန်းအထက် (သို့) ကန့်သတ်စျေးအောက် ၁ ရာခိုင်နှုန်းချထားသင့်ကြောင်းအချက်ပြသည်။
ထို့ကြောင့်အမြတ်ယူခြင်းအား ၀ င်ဈေးထက် ၃ ရာခိုင်နှုန်းအထက် (သို့) သင်၏ရပ်တန့်အရှုံးသို့ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြများသည်နှစ်ခုလုံးကိုအန္တရာယ်ယူသည် နှင့် ဆုလာဘ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းယူရမည့်အမြတ်တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
Risk နှင့် Reward2ကုန်သွယ်မှု Litecoin Trading Signals ကိုလေ့လာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြများတွင် ၁: ၃ စွန့်စား/ဆုလာဘ်ဗျူဟာကိုချမှတ်လေ့ရှိသည်။ ရွှေတောင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အကြံပေးပါ ရှည်လျားသောအကျိုးအမြတ် ၃ ရာခိုင်နှုန်းရလိမ့်မည်။ အထက် ဝင်ကြေး အားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရင်အမှတ်တစ်ခုဆီ ဦး တည်တယ် တိုတောင်းသော ရာထူး၊ အမြတ် ၃ ရာခိုင်နှုန်းရလိမ့်မည်။ အောက်တွင် ကန့်သတ်အမိန့် ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ် ၃ ခုတိုင်းမှ ၁ ခုကိုအမြတ်ရရန်မျှော်လင့်သည်။
အခြားမျက်နှာသာရသောဗျူဟာများမှာ ၁: ၁.၅၊ ၁: ၂ နှင့် ၁: ၄ တို့ပါဝင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေဤအန္တရာယ်/ဆုလာဘ်နည်းဗျူဟာများသည် stop-loss နှင့် take-profit orders များပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
အရည်အသွေး Litecoin Trading Signals Telegram Group
Litecoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြများ၏ခြင်္သေ့၏ဝေစုကို Telegram အဖွဲ့မှတဆင့်တွေ့နိုင်သည်။
အားကိုးပြီးလုံလုံခြုံခြုံစာဝှက်ထားတဲ့ သုံးစွဲသူသန်း ၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်မည်သည့်ဒေတာမျှမလိုအပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးမှာစာများအားလုံးကိုလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်စာဝှက်ထားသည်
အချိန်နှင့်တပြေးညီမက်ဆေ့ဂျ်များ၊ လက်ခံပါ cloud-based messaging ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ Litecoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုများ
အုပ်စုလိုက်စကားပြောခြင်း။ လူ ဦး ရေ ၂၀၀၀၀၀ အထိအုပ်စုများကိုဖွင့်နိုင်သည်။ အကြံဥာဏ်များလဲလှယ်ခြင်း၊ သီးသန့်စကားပြောခြင်း၊ စတစ်ကာများဝေမျှခြင်း-တူသောကုန်သည်များအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းပါ
အခမဲ့: Telegram အက်ပလီကေးရှင်းကို iPhone သို့မဟုတ် Android တွင်အခမဲ့ download လုပ်ပါ။ ထို့နောက်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto ရောင်းဝယ်ရေးအချက်ပြအုပ်စုသို့စာရင်းပေးသွင်းပါ
အမြင်အာရုံအထောက်အထား ကျွန်ုပ်တို့၏ Liteoin ကုန်သွယ်မှုအချက်အလတ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနရလဒ်များကိုပြသရန်စျေးနှုန်းဇယားများနှင့် crypto ဂရပ်များပါ ၀ င်သည်
အခမဲ့ Litecoin Trading အချက်ပြများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်အရည်အသွေး Litecoin ကုန်သွယ်မှုအချက်အလတ်များပေးရန်နာရီ ၀ န်းကျင်တွင်၎င်းသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်ပရီမီယံ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မသက်ဆိုင်ပါ။ အခမဲ့ရွေးချယ်မှုတွင်တစ်ပတ်လျှင်အချက်ပြ ၃ ခုပါ ၀ င်သည်။
အချို့အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာအခမဲ့ ပေး၍ ကျန်ကိုကြည့်ရန်သင်ငွေပေးချေသည်။ Premium အစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့အချက်ပြမှုများတွင်တူညီသောသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမှသိသာထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးများသာရှိသည် - အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ပရီမီယံအစီအစဉ် Litecoin အချက်ပြများ
အထူးသဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်သောအခါတစ်ပတ်လျှင် Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြ ၃ ခုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်သင်ပိုလိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လျှင် Learn3Trade Premium အစီအစဉ်အတွက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများကတစ် ဦး လျှင်အကြံပြုချက် ၃ ခုမှ ၅ ခုထိအစား ping လုပ်လိမ့်မည် နေ့မရ။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်နေ့တိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြများထဲသို့ထည့်ထားသောအလုပ်ကိုဂုဏ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာမေးပွဲဖြေရန် ၀ မ်းမ ၀ င်သောမည်သူမဆိုအားရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းအာမခံပေးသည်။ သေချာစွာသိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအစစ်အမှန် crypto စျေးကွက်ကိုထင်ဟပ်စေသော brokerage demo account ကိုစမ်းရန်ဖြစ်သည်။
မင်းငါတို့ဆီက Telegram အရောင်းအဝယ်အချက်ပြကိုလက်ခံတဲ့အခါ virtual account မှတဆင့် order box ထဲကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုထည့်ပါ
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂/၃ ပတ်ကြာအောင်ပြန်လုပ်ပါ၊ အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမှတ်သားပါ
ထိပ်တန်းအဆင့် crypto ပွဲစား eToro ကို FCA, ASIC နှင့် CySEC တို့ကထိန်းညှိပေးပြီးဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ virtual သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုပေးသည်။ ကော်မရှင်မပါဘဲကုန်သွယ်ရန် cryptocurrencies စုပုံများကိုမပြောပါနှင့်။ အဆုံးစွန်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားမပျော်ပါက Learn 100 Trade တွင် ၀ ယ်သူကူညီရေးအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်တောင်းဆိုပါ။
ပရီမီယံအစီအစဉ် - စျေးနှုန်းပြိုကွဲခြင်း
အောက်ပါ Premium အစီအစဉ်၏စျေးနှုန်းကိုအောက်တွင်ရှာပါ။
၁ လအစီအစဉ် - ၃၅ ပေါင်
တစ်သက်တာ Access ကို: £ 250
အသစ်ရောက်လာသူအများစုသည်ပေါင် ၃၅ ၁ လအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်သည်။ အားလုံးပြီးသွားရင်ငါတို့ကငွေပြန်အမ်းတဲ့အာမခံချက်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းက free brokerage demo ကနေစမ်းကြည့်ရင်မင်းမှာဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူး။
ကုန်သွယ်မှု Litecoin ကုန်သွယ်မှုအချက် ၂ ချက်ကိုလေ့လာပါ။
မင်း Litecoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြတွေကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါ။
အဆင့် ၁: Learn 1 Trade Crypto Signals Service သို့မှတ်ပုံတင်ပါ
Learn2Trade အတွက်စာရင်းသွင်းပါ crypto အချက်ပြမှုများ ၀ န်ဆောင်မှု - အခမဲ့သို့မဟုတ် Premium အစီအစဉ်အတွက်ရွေးချယ်ခြင်း
ဘောလုံးလှိမ့်ရန်အခမဲ့အရစ်ကျဒီမိုအကောင့်နှင့် ၁ လအစီအစဉ်ဖြင့်စချင်ပေမည်။
အဆင့် ၂: ကျွန်ုပ်တို့၏ Litecoin Trading Signals Telegram Group သို့ ၀ င်ပါ
သင်၏ iPhone (သို့) Android device အတွက်အခမဲ့ Telegram အပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram crypto-signals group ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်စာရင်းပေးသွင်းပါ။
အဆင့် ၃။ သင်၏ကြေးနန်းအသိပေးချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ
မင်းရဲ့ Telegram အသိပေးချက်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ၊ ဒါကြောင့်မင်းကငါတို့ရဲ့ Litecoin ကုန်သွယ်အချက်ပြတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလက်လွတ်မခံဘဲနေနိုင်အောင်လုပ်ပါ။
အဆင့် ၄: Litecoin Trading အချက်ပြများရယူပြီးအော်ဒါများဖန်တီးပါ
ယခုသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကြိုးပမ်းမှုများတွင်သင့်ကိုလမ်းညွှန်ရန် crypto အချက်ပြများကိုလက်ခံရလိမ့်မည်။
အဆင့် ၅: Litecoin Trading Signal ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
အရောင်းအဝယ်အချက်ပြတစ်ခုသည်သင်၏ Telegram inbox တွင်ရောက်သောအခါသင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားသို့သွားပါ။
ထို့နောက် crypto trading signal တွင်ပါ ၀ င်သောအသေးစိတ်များကိုရိုက်ထည့်ပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုဖွင့်ပါ။ မင်းရဲ့ stop-loss နဲ့ take-profit orders နှစ်ခုလုံးကိုငါတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဖြန့်လိမ့်မယ်-ဒီစျေးနှုန်းတွေထဲကတစ်ခုတက်လာရင်မင်းရဲ့ Litecoin ရာထူးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိုက်လိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံး Litecoin Trading အချက်ပြ ၂၀၂၁: စီရင်ချက်
လေ့လာမှု ၂ ခုတိုင်းတွင် Litecoin ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြသည်မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်ရှည်သည်ဖြစ်စေ၊ တိုသည်ဖြစ်စေသွားရန်သင့်အားပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုမပါ ၀ င်သောအချက်တစ်ခုကိုမပို့ပါ၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအရှုံးပေါ်ပြီးအမြတ်ယူမှုအမိန့်များပုံသဏ္န်ရှိစေရန်သေချာသည်။
ပရီမီယံအစီအစဉ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်ငါတို့သည်တစ်ပတ်လျှင်အချက် ၃ ချက်အခမဲ့ကမ်းလှမ်းသော်လည်းသင်တစ်နေ့လျှင်အကြံပြုချက် ၃-၅ ပို့လိမ့်မည်။ ထို့ပြင်သင်မကျေနပ်ပါကရက် ၃၀ အတွင်းပြန်အမ်းငွေတောင်းနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်သည်စည်းမျဉ်းခံပွဲစား Capital.com တွင်ရှိသည်။ အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြင့်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရန်ကမ်းလှမ်းထားပြီး cryptocurrencies ၁၈ ခုရှိသည်။
Litecoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြများသည်စျေးကွက်အတွင်းအလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းများကိုတင်ပြသည်။ ၎င်းကိုအများအားဖြင့်အခမဲ့စာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှု Telegram မှတဆင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ အကောင်းဆုံးအချက်များတွင် ၀ ယ်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ အမြတ်ယူခြင်းနှင့်ရပ်တန့်အရှုံးစျေးနှုန်းများပါဝင်သည်
သင်သည်သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၌သြဇာကိုသုံးနိုင်လျှင်၊ မည်သည့် Litecoin အရောင်းအဝယ်အချက်ပြ၏မဆိုရှယ်ယာကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းသည့်ပမာဏ (သင်ရှိလျှင်) သင်နေထိုင်သောနေရာ၊ သင်ရောင်းဝယ်နေသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှသင်မည်မျှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ကိုမူတည်လိမ့်မည်။
Telegram မှတဆင့်အရောင်းအဝယ်အချက်ပြကိုလက်ခံရရှိပါကအမိန့်ပုံးထဲသို့အကြံပြုချက်အသေးစိတ်ကိုထည့်ရန်သင်ရွေးချယ်သောအွန်လိုင်းပွဲစားသို့သွားပါ။ လူများစွာသည်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုစတင်အသုံးပြုကြသည်။ eToro သည်သွားလာရလွယ်ကူပြီးလက်တွေ့ငွေဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြင့်သရုပ်ပြအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုသင်ပေးလိမ့်မည်